Ukufakelwa kombane kwikhompyutha- yintoni? Uyenza njani? Ingaba ibiza malini? Uqikelela njani?
Ukuhanjiswa kwekhompyuter yeyona ndlela isemgangathweni kunye neyona nto intle kakhulu yokuhombisa impahla. Inomsebenzi wokufakelwa kombhalo, isimboli okanye uhlobo lwelogi kusetyenziswa imicu kunye nomatshini olawulwa yikhompyuter othathe indawo yezandla namhlanje.
Singayambathisa ngokoqobo nantoni na kwaye nantoni na. Ukufakelwa kwekhompyuter kusetyenziswa ngempumelelo kuzo zonke iintlobo zelaphu, ukudala impahla ekhethekileyo yecandelo. Impahla enxitywa ngabaqeshwa benkampani yakha igama, uphawu kunye nemvakalelo yoluntu. Bonke abasebenzi, njengabathandi bebhola kwiiyunifomu, badlala kwiqela elinye.
Ndwendwela ivenkile yethu online
Ukufakelwa kombane kwikhompyuter nako kunokusetyenziswa ngempumelelo ekwenzeni igajethi kunye neengubo zentengiso. Ilogo ehlanganisiweyo kunye negama lenkampani Kwikipa kunye ne sweatshi ziya kuba sisipho esihle kubaxumi. Ngokunxiba impahla yethu yokuthengisa, baya kuyikhulisa uphawu lwethu.
Nangona kunjalo, ukuhanjiswa kwekhompyuter akusebenzi kuphela kwiimpahla. Unako nokufaka umhombiso ngekhompyutha kwi iikepusi, iingxowa, iitawuli, iibhafu zokuhlambela kunye iimpahla zomsebenzi.
Iilogo ezihlanganisiweyo kunye nemibhalo ebhaliweyo ihlala ixesha elide ngakumbi kunokuba isuswe ngokulula kunye nepeyinti enomtsalane egxunyekwe kuyo, ehambelana nesinxibo esifana nesigqibo esiqhelekileyo.
Ukufakelwa kwekhompyuter-imbali yokuprinta kwiimpahla zentengiso
Kumaxesha amandulo, abafazi babhinqe iipatheni kwiingubo kunye neetafile ngesandla.
isambatho zihlala ziyinto yenkcubeko kunye nophawu lwommandla kunye nesizwe. Kwanele ukukhumbula i-Kashubian eyaziwayo okanye imfakamfele yendawo ephezulu, eyinto engenakuthelekiswa nanto yezixhobo zesintu.
Ngale ndlela, iingcali zokuthengisa kunye ne-PR zaqala ukusebenzisa ngokukhawuleza ukuzhlulahlula kwisihlwele, kunye nokuchonga amaqela abantu anemifanekiso. Umsebenzi onxibe impahla ekhethwe ngokufanelekileyo uphathwa ngendlela eyahlukileyo ngumthengi. Umzekelo, njengabaqhubi beenqwelo moya, amapolisa kunye namajoni ahlonitshwayo, enxibe iyunifomu yawo entle, abasebenzi bamanye amashishini baziwa ngendlela eyahlukileyo ngokupheleleyo kwiiyunifomu kunye neempahla ezahlukileyo. Akumangalisi ukuba iinkampani ezininzi zithathe isigqibo sokugcina imali kwiiyunifomu ezizodwa. Ndiyabulela kule nto, abasebenzi babo banokuziva njengeqela elinye, bedlala kunye ngenjongo enye.
Ukufakelwa iimpahla kukwathetha igajethi kunye neengubo zentengiso. Wonke umntu uthanda izipho, ii-freebies okanye amabhaso. Ukuba ufumana ibhegi, ikepusi okanye i-T-shirt enophawu lwenkampani, ngokuqinisekileyo uya kuyinxiba, ngaloo ndlela ephengise uphawu.
Uphuhliso lwezoqoqosho kunye ukudityaniswa kwehlabathi yenza imfuno yokufeketha iyakhula minyaka le. Ngethamsanqa, ukuqhubela phambili kweendlela zekhompyuter kube negalelo ekukhuleni kwamathuba. Okwangoku, ukufakelwa okubhaliweyo kunye neepateni kwiindidi ezahlukeneyo zeempahla kunye nezinto zokuncedisa ngoku kuyakhawuleza, zichanekile, zichanekile, ziyaphindeka kwaye zingabizi. Namhlanje, amawaka eemfelesi zinokwenziwa ngaphandle kweengxaki kwaye kwixesha elifutshane lokuhlangabezana nokulindelwe okukhulu kakhulu.
Uyenza njani i-embroidery yekhompyuter?
Ukufakelwa kwekhompyuter-itekhnoloji yokufakelwa kombhalo kwisinxibo
Oomatshini banamhlanje baxhotywe ngenaliti nangeentambo zemibala eyahlukeneyo. Inkqubo yokuthunga ilawulwa yinkqubo yekhompyuter. Ngokusekwe kuyilo olwenziweyo, umatshini uthungela oonobumba abafanelekileyo kunye neemilo.
Uyilwa njani i-embroidery, iipatches
Kwanele ukugqiba ukuba yeyiphi indawo okanye zeziphi izinto ozifunayo ukuze ube zezombethe. Ukongeza, kuya kufuneka ukhethe uyilo kunye nobungakanani. Rhoqo, imibhalo ebhaliweyo ene-typeface efanelekileyo kunye ne-logo yeenkampani kunye namaziko ayashicilelwa. Iphethini kufuneka ithunyelwe kunye nomyalelo, kwaye iingcali zethu ziya kunceda ukulungelelanisa neemfuno zomatshini wokuthunga ikhompyuter.
Izibonelelo zokuxutywa kweekhompyuter
Inkangeleko yinto eyenza impahla yokunxiba enemifuno eqaqambileyo ivele ngaphandle. Ukufakelwa kakuhle ngononophelo kunika izinto ezisemgangathweni omtsha. Iyivakalelwa kukuchukumisa, nje ngesitayile. Ukufakelwa kwekhompyuter kunika impahla yokunxiba kunye nezinto zokuhombisa kunye nobuhle, kwaye uphawu olubhengezwe yiyo lufumana iwonga. Khawufane ucinge ngee-T-shirts ezimbini, enye inophawu oluhonjiswe kakuhle kwinkampani kunye nenye ene-foil yentengiso ebambelele kuyo. Umfanekiso onjalo uzisa engqondweni i-juxtaposition ye-Mercedes enqabileyo nenhle ecaleni kweplastiki kunye nexabiso eliphantsi.
Ngenxa yoko, uzinzo lwefomathi yeekhompyuter ilunge ngakumbi kunolo lwabakhuphisana nayo. Ukufakelwa kufutshane kuhlala kuzinzo olufanayo nolo luyinxibayo. Akukho sidingo sokukhathazeka malunga nokuba uphawu okanye uphawu lubhalwe xa kuhlanjwa okanye kusenziwa isinyithi. Ukufakelwa kwekhompyuter kuyinxalenye yeempahla, kwaye kungekuphela kokunokukhutshwa ngokulula, okungasetyenziswayo okungasisigxina okunokubonakala okubonakalisayo kuthoba ngokukhawuleza.
Ukufakelwa kombane kwekhompyuter kungangowuphi na umbala. Umda kuphela umbala wentambo osetyenzisiweyo. Ukufakelwa okwenziwa ngokuchonga ngokuchanekileyo kulawulo lwekhompyuter.
Ukufakelwa umbala kunokuhonjiswa umntu. Itekhnoloji yekhompyuter ivumela ukuchaneka, ukuphindaphinda kunye nezisombululo eziphezulu zokwenza iipateni, iisimboli kunye nokubhaliweyo.
Ngomthamo ophezulu, i-embroidery ihlawula nje ngokoqoqosho. Ixabiso layo liphantsi, lenza ukuba kulungele ukuhombisa zonke iintlobo zeengubo-ihempe, ihempe, ihempu, ibhulukhwe, iifutshane - kunye neetawuli, iminqwazi kunye neengxowa.
Ukungalunganga kokufakwa kweekhompyuter
Ngokuchasene nokuprintwa okuqhelekileyo, okugcwele kumphezulu wekhompyuter, akunakwenzeka ukuba ufake umfanekiso opheleleyo ngephalethi yombala ongenamda. Nangona kunjalo, ayisiyiyo le nto konke konke. Ukufeketha kukubhekisa kwisiko, ukumfusa wobukhosi, kuba kudityaniswa neengubo zangaphantsi zokuhombisa iimpahla zoluntu oluphezulu. Ayinanto yakwenza ne-kitschy, enemibala kunye nepeyinti zokupeyinta.
Ukufakelwa kwekhompyuter-iimveliso ezidumileyo kunye neengubo zentengiso
Ihembe le-Polo kunye nephethini etyhidiweyo
Ukunxulumana kokuqala? Isikipa esinekhola kunye ne-logo ebotshelelwe kakuhle esifubeni. Umdibaniso we-elegance kunye nokunxiba ukuthuthuzela. Yenza abantu bonwabele ukunxiba i-t-shirts ezinjalo kunye nelogo yenkampani okanye yeziko lakho.
Iikipa ezineempawu zenkampani ehlanganisiweyo kunye nemibhalo ebhaliweyo
Ilungele ukunxiba yonke imihla. Vumela abasebenzi okanye abathengi bakho babhengeze uphawu lwakho olunxibe enemikhono emifutshane ehonjiswe lophawu lwakho okanye umbhalo obakhuthazayo ukuba basebenzise iinkonzo zenkampani yakho.
I-T-shirt esemgangathweni ophezulu kunye nephethini etywetywe yikhompyuter okanye umdibaniso ngumdibaniso ogqibeleleyo ekuvumela ukuba ume ngaphandle kwesixuku seT-shirts zentengiso yaseTshayina ezinomgangatho ophantsi kunye nohlobo oluqinileyo.
I sweatshi kunye nephethini etyhidiweyo
I-hoodie yeklasikhi inokwazisa ngemveliso okanye uphawu. Faka ipassword yakho, igama kunye / okanye uphawu kwi-sweatshirt.
Ukuhanjwa kwekhompyuter ngoboya
Ngaba ufuna ukuba abasebenzi bakho bafudumale kwaye kwangaxeshanye babone inkampani kunye neempahla zabo? Okanye ngaba ufuna ukwenza eyona ngubo intengiso yomgangatho kwinkampani yakho? Uboya obuhonjiswe ngekhompyuter lukhetho oluhle.
Iitshiti ngombhombiso wekhompyuter
Ihlelekile ngakumbi kwaye inqabile? Yenza abasebenzi bakho ukuba bakhonze abathengi benxibe iimpahla ezihonjisiweyo ezine logo yenkampani ehlanganisiweyo. Khetha umdibaniso wekhompyuter kwihempe.
Ibhulukhwe eprintiweyo kunye neifutshane
Ayisiyengubo yangaphezulu kuphela egqibeleleyoyo yokufakelwa kombhalo okanye iphethini. Ingubo yokwaleka ibhulukhwe okanye iibhulukhwe zenza iimpahla ezizodwa zokuhlaziya.
Ukufakelwa kombane kwikhompyuter
Kunzima ukuba nomfanekiso ngqondweni we-baseball ngaphandle komqondiso weqela lakho owuthandayo, eyunivesithi okanye izidanga. Yenza i-logo yeziko lakho okanye inkampani ibonakale nje. Zibethe entloko.
Iithayile kunye neebhafu zokuhlambela ezinomfanekiso obhinqileyo kunye nokubhaliweyo
Akukho nto iya kwahlula ihotele kunye ne-SPA njengoko kufakwe iitawuli kunye neebhafu zokuhlambela. Guqula iitawuli ezingenagama, boring zibe yinto eyodwa egxininisa ukunethezeka kwhlobo lwakho. Yigugu kuwe, kodwa ikwayimvakalelo yokundwendwela iindwendwe zakho.
Iingxowa ngee-embroidery zekhompyuter
Ungayibeka njani lula ibhegi enegama kunye nelogo yenkampani? Ukufakelwa kwekhompyutha kusebenza kakuhle. Ngexabiso eliphantsi nangokukhawuleza, ibhegi eqhelekileyo inokujika ibe yinto yokwahlula inkampani yakho.
Isinxibo esisilumkiso kunye nokuhanjiswa kweekhompyuter
Iimpahla zomsebenzi zisebenza kakuhle njengeziko lokuphatha iimpahla zempahla yeekhompyuter. Igama, umsebenzi, igama lenkampani kunye ne-logo-embroider kwisuti okanye enye into ekhethekileyo yokugqoka kunye nokubonakala okuphezulu.
Ukufakelwa kombane kwekhompyutha- lixabisa malini?
Ukufakelwa kombane ngekhompyutha kuyinto elula. Nangona kunjalo, kunzima ukuchaza ngokuthe ngqo ixabiso lokuthunga elilodwa, kuba iiparameter ezininzi zichaphazela le ndleko.
Ukufakelwa iikhompyuter kuya kuba sexabiso eliphantsi ngokukodwa kwi-oda enkulu. Ixabiso likwachukunyiswa bubungakanani bendawo eza kufakwa kuyo, uhlobo lwendlu ngokwayo, uxinano lwephethini kumphezulu, inani lamanqatha enaliti ngeesentimitha.2 Izinto zokwakha, kunye nenani leendawo apho ubhaptizo kufuneka lubekwe khona entweni.
Ixabiso lihlala lingaphenjelelwa linani lemibala esetyenzisiweyo, njengoko umatshini wokuthunga uneentambo ezininzi.
Siyakumema kuxabiso lweprojekthi nganye. Nceda usithumelele iigrafiki ozifunayo ukuze ufake umchiza kunye nolwazi malunga nenani lamaqhekeza ekufuneka lenziwe.
5 / 5 ( 53 iivoti )
yintoni umsebenzi wecomputeryintoni umsebenzi wecomputerindawo yokwenza umatshini wekhompyuterisambatho sekhompyuterIngubo ekhompyuter ye-Białystokisambatho sekhompyutheni BielskoUmdibanisi wekhompyuter kwi-byggzzczikhompyuter ixabiso lexabiso lekhompyuthaUluhlu lwexabiso lekhompyuthaUkwenza iimpahla ngempahla zekhompyuterUkwenza iimpahla ngempahla zekhompyuterIngubo egcinwe kwikhompyutha yeCzęstochowaikhompyuter ye-embroidery gdańskUmbhinqo wekhompyutha weGdyniagliwice ekhompyutheniU-Gniezno wekhompyuter kwi-embroideryUkwenza iimpahla zekhompyuter:Ukufakelwa kombane ngekhompyutha kujongeka ngathiisambatho sekhompyuterUkuhanjiswa kweekhompyuterUkudityaniswa kweekhompyuterUkuhanjwa kweekhompyuterUmbhinqo wekhompyuthaKatowice ekhompyutheniUkufakelwa kombane kwi-kielceisinxibelelanisi seekhompyuter uKoninisinxibo sekhompyutha eKoszalinIngubo egcinwe kwikhompyutha kwiKrakowukuhanjiswa kweenqanawa zekhompyuterUluhlu lwexabiso lekhompyuter lweebhulethiniUmbala wekhompyutha uLublinisambatho sekhompyuter kwi-T-shirtsikhompyuter umatshiniIngubo yentsimbi yeekhompyuter Nowy SączIngubo egcinwe kwikhompyuterisinxibo sekhompyuter kwiOpolei-pabianice esekhompyutheniikhompyuter eyoyikisayoikhompyutha ye-embroideryisambatho sekhompyuter yeRybnikumdibaniso wekhompyuter we-reichsIngubo egcinwe kwikhompyuter ye-Silesiałł computersk embłIngubo ekhompyutheni eseSosnowieciarhente yokusetyenziswa kweekhompyuter swarzędzImisonto ekhompyutheni yeebhulorhoUmthungi wekhompyuterisuntswana lekhompyutha in Tarnówistayile esisetyenziselwa ikhompyutha in Toruńikharakhtha yokuhombisa ngekhompyuthaUluhlu lweekhompyutheni zemfazwe yeekhompyuterikhompyutha yeqela lasekhayaIipateni zokuhombisa zekhompyuterikhompyutha eluhlaza emfusa intaba eluhlazayimalini i-embroidery yekhompyuterUyenza njani i-embroidery yekhompyuterindlela yokuxabisa ixabiso le-embroidery yekhompyuterYintoni imbonakalo yecomputer ekhangeleka ngathiUyenza njani i-embroidery yekhompyuterindlela yokukrazula ukuhanjiswa kweekhompyuterUyenza njani uyilo lwekhompyuterUyenza njani i-embroidery yekhompyuterIikipaiiprintaiimpahla zentengisoukuthunga